ungazinika kanjani amandla izinketho zonjiniyela ku-Android (isebenza ku-google pixel, isamsung galaxy s7, njll)
none Izindaba Nokubuyekezwa Ungazivumela kanjani izinketho zonjiniyela ku-Android (isebenza kuGoogle Pixel, Samsung Galaxy S7, njll)
Ungazivumela kanjani izinketho zonjiniyela ku-Android (isebenza kuGoogle Pixel, Samsung Galaxy S7, njll)
Imvamisa kuzifundo lapho kufanele wenze okuthile okuba xaka kakhulu kufoni ye-Android, uzobona ukuthi isinyathelo esithile ukwenza okuthile kokuthi 'Izinketho Zonjiniyela'.
Uma ufuna Izinketho Zonjiniyela kufoni yakho ye-Android, noma kunjalo, ngeke uthole lutho kuzilungiselelo.
Lokhu akuyona into engaqondakali. I-Google ifihle ngamabomu ithebhu 'Izinketho Zonjiniyela' kuzilungiselelo, ngoba kuyinto ebhekwa njengedingeka kuphela kubasebenzisi bamandla. Izici eziguqukayo kokuthi Izinketho Zonjiniyela zingathinta umuzwa womsebenzisi wefoni ye-Android kakhulu, futhi ngokwemvelo, yingakho iGoogle ithanda ukuthi abasebenzisi abaningi bangakwazi ukufinyelela kuyo ngokushesha.
Ngokungafani ne-Apple, noma kunjalo, i-Google ne-apos; s Android iyisistimu evulekile futhi lokhu kusho ukuthi ukunika amandla Izinketho Zonjiniyela ku-Android kungumsebenzi olula. Udinga nje ukukhumbula ukuqaphela ngenkathi uhlola lezi zindlela ezifihliwe zesikhulumi se-Android. Futhi kungani udinga ngisho 'Nezinketho Zonjiniyela' kwasekuqaleni?
Izinketho Zonjiniyela zifihliwe ekubukekeni okusobala, kepha ungayivumela kalula ukuthi isebenzise i-tweak yakho
Kunezizathu eziningi kakhulu kunokuba singalingana ku-athikili emfushane enjengale: kunjalo, okokuqala futhi okubaluleke kakhulu uma unjiniyela futhi ufuna ukuhlola izinhlelo zokusebenza kudivayisi yakho, kepha futhi nokunika amandla izinto ezifana nezindlela ezahlukahlukene zombala (uvamise ukunika amandla Imodi yombala we-sRGB kusuka ku-Izinketho Zonjiniyela), ukubona ukuthi isebenza kanjani kahle idivayisi yakho ngamazinga wozimele wesikrini, nokuningi. Ngakho-ke uvumela kanjani Izinketho Zonjiniyela ku-Android? Mane ulandele lezi zinyathelo ezingezansi bese ukhumbula ukuthi lesi sifundo sisebenza kuwo wonke amafoni we-Android: i-Samsung Galaxy S7, i-Google Pixel, i-LG G5 ne-V10, i-HTC 10, nezinye.
Ungavumela kanjani izinketho zonjiniyela ku-Android
usuku lokukhishwa kwesizukulwane se-ipad 6
usuku olusha lokukhishwa kwe-ipad pro 2018
Ibhukwana lokubuyekeza le-Galaxy S6 Nougat seliphumile, nansi umehluko nge-Android 7 ku-S7
I-Samsung Galaxy S8 ne-S8 + manje ziza nezindawo zamahhala zokushaja okungenantambo kwaBest Buy
Ungayikhubaza kanjani i-KnockON (thepha kabili ukuze uvuke) ku-LG G3 nakwezinye izingcingo ze-LG Android
I-FaceTime ithola amathani wezici ezintsha nge-iOS 15. Abasebenzisi be-Android bangajoyina izingcingo ze-FaceTime
Gcina $ 300 ku-Apple & apos; s MacBook Pro (15.4 ', 2018) nge-Intel Core i7 processor, iTouch Bar, i-16GB RAM, i-512GB SSD
I-Embold - Ipulatifomu ye-AI Based Software Analytics
I-Samsung Galaxy Note 20 vs Note 20 Ultra: uyini umehluko?
Amadili weBlack Friday Pixel: amadili amahle kakhulu wePixel 4, Pixel 3, Pixel 3a
I-iPhone X ayinaso isithwebuli seminwe (i-Touch ID). Uzizwa kanjani ngalokho?
Iyiphi ifoni enekhamera ephambili kakhulu: i-iPhone 7 vs i-Galaxy S7 Edge vs LG V20 vs Sony Xperia XZ selfie Ukuqhathanisa